अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु, आज ५ अन्तराष्ट्रिय उडान भए ।(तालिका सहित) – Yuwa Aawaj
अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु, आज ५ अन्तराष्ट्रिय उडान भए ।(तालिका सहित)
असार २, २०७८ बुधबार 852
काठमाडौ : को’रोना महामा’रीको कारण अन्तराष्ट्रिय उडान प्रभा’वित छन् । यस क्रममा दैनिक निश्चित चार्टर्ड, नियमित र कार्गो उडानहरु भईरहेका छन् ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको जानकारी अनुसार अहिले अन्तराष्ट्रिय उडान तर्फ सबैभन्दा धेरै उडानहरु कार्गो अन्तर्गत रहेका छन् । त्यस्तै एक साता यता सरकारको निर्णय अनुसार निश्चित नियमित उडानहरु पनि हुन थालेका छन् ।
नियमित उडानहरुतर्फ सातामा एक उडान टर्की र दोहाको उडान हुन थालेको छ । दोहाको लागि नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजको उडानलाई अनुमति दिईएको छन् ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जानकारी अनुसार सनिबार अन्तराष्ट्रिय तर्फ ५ उडान भएका छन् ।
जस अन्तर्गत हिमालय एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सको कार्गो उडान भएको छ । त्यस्तै तुर्किस एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानबाट ३६ जना नेपाल आएका छन् । त्यस्तै लन्मेई एयरलाइन्स र स्पाइस जेट लिमिटेडको कार्गो उडान भएका छन् ।
आइतबार (आज) दोहा-काठमाडौँ-दोहाको चार्टर्ड उडान हुँदैछ । यस बाहेक सान मारिनो एक्जुटेभ एयरलाइन्सले कार्गो उडान भर्दैछ भने ट्यारोल एयर एम्बुलेन्सले जर्जिया-काठमाडौँ उडान भर्दैछ । तयस्तै हिमालय एयरलाइन्सले कार्गो उडान भर्दैछ ।
Prevनेपाली १९ रुपैयाँमा युरोपमा १५०० वर्गफुटका घर बेचिँदै !
Nextयी हुन् क्यान्सर गराउन सक्ने प्रमुख ५ खानेकुरा, थाहा पाउनुहोस ।
अभिनेता सोनुको महान काम – सडकमा अ’लपत्र आमा र वच्चालाई दिने भए घर !
नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन किटको अभाव, भारतबाट भित्रिएका सोझै गाउँमा ।
बाबुको ला’स नउठ्दै ऋ’ण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ।( हृदयस्पर्शी कहानी)